Hery Rajaonarimampianina : “Aoka izay ny famotehana firenena” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “Aoka izay ny famotehana firenena”
Hery Rajaonarimampianina : “Aoka izay ny famotehana firenena”
27/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsapa sy re nandritra ny kabaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fahendrena sy ny fitiavan-tanindrazana indrindra ny fitiavana ny vahoaka malagasy, ho azy dia efa ela taorian’ny fahaleovantena isika no tokony ho tafita, saingy teo hatrany ny fanembatsembanana sy ny fitiavan-kely. Noho izany hoy ny filoha dia tokony efa tsy ho izany intsony izao, “nanjaka loatra teto amin’ny firenena hatrizay ny ady amin’ny tombontsoa manokana sy ny vola, ary hadino tanteraka ny tombontsoam-bahoaka, izany ny antony hilazana hoe « ampy izay » hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Manoloana io ady izay atrehina io dia nilaza ny filoham-pirenena fa “tsy avelantsika ho kisarintsarim-pahaleovantena intsony noho izany ny fahaleovantenan’i Madagasikara ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana amiko. Ataontsika ho fahaleovantena amin’ny lafiny rehetra izany, izany no tanjontsika. Fahaleovantena ara-tsakafo, tanjona goavana izany, ny malagasy rehetra no voakasik’izany. Tany amin’ny taona 60 sy 70, dia mbola nanondrana vary isika, rehefa tonga ny krizy politika sy ny adilahy politika, nifanesy very izany toeran’ i Madagasikara izany. Very izany fahaleovantenan’i Madagasikara izany’’.
Manoloana izay fijerena hatrany ny tombontsoam-bahoaka izay dia nilaza ny filoha hery Rajaonarimampianina fa “tokony handray ny andraikiny avy ireo mpanao politika tsirairay. Tokony hanjaka anatin’izy ireo avy ny fitiavan-tanindrazana ary hihoaran’izy ireo ny fizarazarana sy ny ady. Noho izany dia tokony hitoetra anatintsika tsirairay avy ny asa amin’ ny fijerena lavitra ny fampandrosoana. Ny dimy taona nitantanako ny firenena dia taonan’ny asa mba hivoahan’ny firenena anatin’ny ziogan’ny fahantrana sy ireo mpanararaotra. Ny fivoaran’ny firenena rahateo izay efa sasa-miandry izany ny vahoaka malagasy” hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Amin’ ny maha ankatoky ny fifidianana ny fotoana ankehitriny dia nanipy teny ny filoham-pirenena ho an’ ireo mpisehatra amin’izany “antso amin’ny andrim-panjakana rehetra hifarimbona hametraka ny fitoniana sy ny ara-dalàna ary ny fifampitokisana mialoha, mandritra ary aorian’ny fifidianana no ataoko aminao androany. Antso amin’ny firaisamonim-pirenena handray ny andraikiny, hirotsaka mivantana amin’ny fanomanana ary ny fanaraha-maso ny fifidianana. Antso amin’ny antoko politika sy ireo kandida hanendry ny solontenany avy any amin’ireo ambaratonga samihafa misahana ny fifidianana. Antso ho an’ny vahoaka hanaraka ny toromarika mba hisian’ny fifidianana milamina. Hamafisana ny fitandroana ny fandriam-pahalemana, hiarovana ny ain’ny vahoaka sy ny fananany’’.
Tao anatin’ny filaminana sy ny fahamendrehana no nanamarihan’ny malagasy ny fahatsiarovana ny tolom-panafahan’ny 29 Marsa 1947. Nandritra ireo hetsika rehetra nentina nanamarihana izany no niantsoan’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fitiavan-tanindrazana eo amin’ny malagasy rehetra ...Tohiny
Depiote 73 : Nanapa-kevitra ny hiverina eny amin’ny Antenimiera
Hery Rajaonarimampianina : Tsy tokony hisy intsony ireo tsimatimanota